Global Voices teny Malagasy » Goatemalà : Tanora Iray Maty Nisy Namono, Nangina ny Lokanga · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2018 2:16 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika (fr) i Fabienne Flessel, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Mediam-bahoaka, Mozika, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
“ Miaina ambany aloky ny herisetra sy ny fahantràna ireo Goatemalteka an-tapitrisa”,  [ang], hoy ny ‘Amnesty International’ mamaritra ny toedraharaha manodidina ny herisetra izay vao avy namoizana aina indray: tanora iray mpitendry lokanga, Hans Castro sy ireo namany roalahy Andrea Robledo sy Edwin Urrea. Tany amin'ny faritra ambanivohitry ny Tanànan'i Goatemalà no nitranga ireo famonoana ireo, ary tany amin'ny faritra iray antsoina hoe “La Quebradita” ao amin'ny vohitr'i Valle de la Cruz no hita ireo razana.
Sary an'i Midiman , nampiasàna ny lisansa Creative Commons
Nahalatsa-dranomaso ireo bilaogera ny fahafatesan'i Hans Castro, mpikambana ao amin'ny ” Conservatoire de l'Orchestre symphonique”, ary mpitendry lokanga nandritra ny 11 tamin'ireo 18 taona niainany. Vaovao nanohina manokana an'i Sakis González avy ao amin'ny bilaogy [ esp] Una Hoja de Papel satria tsy hafa fa mpinamana akaiky tsy mifankafoy amin'ny anabaviny i Hans Castro, araka izay anazavàny azy ao anatin'ity lahatsoratra ity “Mitomany mpitendry lokanga iray ny Orkesitra, mitomany ny namany ny anabaviko” [esp]:
Rakotra ray aman-dreny, namana ary mpiangaly mozika hafa avy ao amin'ny orkesitra, tonga hanatrka ny fandevenana azy, ny tao amin'ny sekolin'ny mozika, izay nisy an'i Hans. Nilalao ampahany iray mamelovelo fanahy ireo mpitsoka mozika ary tsy nahavita ny tsy hamaoka ranomaso teny amin'ny tavan'izy ireo, izay fitaratry ny alahelo, ary avy eo manendry ny rantsan-tanany ho eo ambonin'ny tady mba hilalao gadona mahafinaritra, izay tsy miainga avy amin'ireo zavamaneno fa avy any am-pon'izy ireo mankany amin'ity tovolahy fakàn-tàhaka ity.
Ilay bilaogera Letras de Mariomarch [esp] dia mibaboka ny fahasarotan'ny fanoratana momba ity tranga ity, saingy koa tsy maintsy milaza zavatra kely ho fahatsiarovana an’ Hans Castro, tao anatin'ny lahatsoratra iray nitondra lohateny hoe “Lokanga iray nisy namono” :
Manoratra ireto andàlana ireto aho, izay tsy ho hitan'ny ray aman-dreniny akory angamba, mba hilazàko ny hevitro momba ity zavamisy izay mampahaleho ahy ity. Mbola misy fanantenana ve ao anatin'ny firenena iray izay amonoana ireo tanora mpanakanto ? Ahoana no hanehoantsika fiarahamiory amin'ny firenena, amin'ny fiarahamonintsika ary amin'ny orkesitram-pirenentsika? Inona no holazaina amin'ny rainy, ny reniny, ny namany sy ny fianakaviany? Mahamenatra, tovolahy iray nanaporofo ny maha-izy azy – samy manana izany ny mpanakanto rehetra – dia nohafohezina tamin'ny alàlan'ny famonoana azy ny fiainany. Ary raha mbola eo am-pamakiana ireny vaovao ireny ny olona, dia mihevitra (mampalahelo, saingy izany no izy) fa dia toy ny tranga rehetra mahazatra ihany io. Tsy milaza aho akory hoe sarobidy be noho ny an'ireo tanora hafa ny ain'i Castro, saingy azoko antoka fa ny famonoana azy dia ohatra iray mibaribary amin'ny hadalàn'ny olona eto amin'ity firenena ity, amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy maintsy hoe eo am-pitendrena sonata feno alahelo sy hadisoam-panantenana izao ilay lokanga nisy namono, dia ilay sonata izay henoin'ny vahoaka goatemalteka isanandro eto amin'ity firenena tsy mahay mankasitraka ity.
Ao anatin'izao herisetra misy izao, izay namoizan'i Robledo, Tobar ary Castro ny ain'izy ireo, misaintsaina lalàna iray vaovao momba ny fahafahana mitazona fitaovampiadiana ny Kaongresy Goatemalteka. Mandritra izany, ny Kaomisiona Iraisampirenena ao amin'ny Firenena Mikambana miady amin'ny Tsimatimanota ao Goatemalà  dia manana andraikitra, mba ho fanohanana ilay firenena amin'ny fanadihadiana sy ny fandravàna ireo “fikambanana mpanao herisetra sy heloka bevava heverina ho tompoandraikitra amin'ny fielezan'ny fanaovana heloka sy ny fahangolen'ny rafi-pitsaràna ao amin'ny firenena.”
Na izany aza, very tanora iray tena nandrandrain'ny hoavy i Goatemalà. Araka ny ambaran'ilay mpanoratra sady poeta, Victor Hugo, “ny mozika no manambara izay tsy hay lazaina ary ireo zavatra izay tsy hay ny tsy hiloa-bava.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/09/119201/
 “ Miaina ambany aloky ny herisetra sy ny fahantràna ireo Goatemalteka an-tapitrisa”, : http://www.amnesty.org/
 Kaomisiona Iraisampirenena ao amin'ny Firenena Mikambana miady amin'ny Tsimatimanota ao Goatemalà: http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15577&Cr=guatemala&Cr1=droits